Deg Deg: RW iyo A. Madoobe oo heshiis ka gaaray Arinta Barre iyo Dekadda Kismaayo |
Deg Deg: RW iyo A. Madoobe oo heshiis ka gaaray Arinta Barre iyo Dekadda Kismaayo
Ku-xigeenka wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ismaaciil Shuuriye ayaa ka warbixiyay kulamo uu maanta raysul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed la yeeshay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka KMG ah ee Jubba iyo qeybaha bulshada.
Wasiir ku-xiigeen ayaa sheegay in maamulka KMG ah ee Jubba iyo raysul wasaaraha ay isku afgarteen in la abuuro jewi ay nabad ugu wada noolaan karaan, isla markaana ay wax ku wada qabsan karaan bulshooyinka gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
Maxamed Ismaaciil Shuuriye ayaa sidoo kale tilmaamay in raysul wasaaraha iyo madaxda maamulka KMG ah ee Jubba ay isku afgarteen in ay dib magaalada Kismaayo ugu noqdaan ciidamada ku sugan deegaanka Goobweyn ee waqooyiga maagaalada.
Wuxuu xusay in raysul wasaare Cabdiweli uu shacabka kala hadlay sidii ay taageero ugu muujin lahaayeen maamulka KMG ah ee Jubba iyo is-dhexgalka bulshooyinka gobolladaas.
Dhanka kale Xigeenka Warfaafinta Maamulka Jubba Geele Maxamed Adan ayaa sheegay in aysan diyaar u ahayn wareejinta Garoonka iyo Dakada Kismaayo isagoona ku sababeeyay in aan la fulin qodobadii kale ee lagu heshiiyay Dalka Ethopia.
Sargaalkan ayaa dhanka kale faah faahiyay arday saakay lagu laayay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubba hoose.